သုဿန်များတွင် လူသေရုပ်လောင်းများ တစ်နေရာတွင်စုပြုံထားပြီးသဂြိုလ်နေ - Myanmar Pressphoto Agency
သုဿန်များတွင် လူသေရုပ်လောင်းများ တစ်နေရာတွင်စုပြုံထားပြီးသဂြိုလ်နေ
Covid_19 deadbody Funerals MPA Myanmar Yangon
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သုဿန်များတွင် လူသေရုပ်လောင်းများ စုပြုံလာပြီး ရုပ်လောင်းများကို လူမြင်ကွင်းတွင် မထားဘဲ တစ်နေရာတွင် စုပြုံထားပြီး သဂြိုလ်မှုများ ပြုလုပ်နေရကြောင်း ပရဟိတ အဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။
“အခု လူမှုကွန်ရက် အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ သတင်းပုံတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ရှင်းနေတဲ့ပုံတွေ ဆိုတာအလောင်းတွေ မရှိတော့လို့ မဟုတ်ဘူး။ အပြင်နဲ့သဂြိုလ်စက်နားမှာ နေရာလွတ်တစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့မှာ စုပြုံပြီးမှ တစ်လောင်းချင်း မီးရှို့နေကြတာ” ဟုအမည်မဖော်လိုသူ လူမှုကူညီရေး အသင်းတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်မှုများကြောင့် လူအပြား နေ့စဉ် သေဆုံးနေရကာ သုဿန်များတွင် လူသေအလောင်းများ စုပြုံလာခဲ့သည်။
အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်မှုများကြောင့် သေဆုံးသူများအတွက် မည်သို့စီစဉ်ထားကြောင်း စစ်တပ်လက်အောက်ခံ ကျန်းမာရေးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ”ကူးစက်ရောဂါကို ကုသတဲ့နေရာမှာ မိမိအိမ်မှာပဲနေမယ်။ ရောဂါဖြစ်ရင် အသိမပေးဘူး။ မိမိဘာသာ အောက်ဆီဂျင်တွေ ဝယ်မယ်။ ဝယ်ပြီးတော့ ရှူမယ်။ ရှူရင်း သေမယ်ဆိုရင်အဲ့တာ အတွက်ကတော့ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲ ဆိုတာစဉ်းစားတတ်ရင် သိမှာပါဟု” MPA သို့ပြောသည်။
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရသူများ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များကို ကြည့်လျှင် လူအများသည် တစ်စုံတစ်ခု ချောင်းဆိုး၊ နှာဆေးပြီဆိုပါက ကိုဗစ် ကူးစက်မည့်အရေး စိုးရိမ်မှုဖြင့် အောက်ဆီဂျင်များ ကြိုတင်စုဆောင်းထားကာ အမှန်တကယ်လိုအပ်သူများအတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာလျှင် ပြတ်လပ်မှု မရှိစေရန် စီမံထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်ခင်ခင်ကြီးက ဆက်ပြောသည်။
MPAအနေဖြင့် စုံစမ်းရရှိသော အချက်အလက်များ အရ ရန်ကုန် တစ်မြို့ထဲတွင် တစ်နေ့လျှင် သေဆုံးသူ ၃၀၀ ထက်မနည်း ရှိကြောင်းသိရသည်။ထို့အတွက် လူသေ အလောင်းများ တင်ရန်ပင် နာရေးကားများလည်း ရှားပါးလျက် ရှိနေသည်။
ရန်ကုန်တွင် တစ်ရက်လျှင် လူသေ မည်မျှရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် စည်ပင်သာယာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ”အဲ့တာတွေက ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ မရပါဘူး” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတွင်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကောင်းစွာမရရှိသည့် အပြင် အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနေရပြီး သေဆုံးသွားသည့် အခါတွင်လည်းနောက်ဆုံး ခရီးအတွက် အခက်အခဲများစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်တပ် အနေဖြင့် အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာများ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီး မြင့်သောပြဿနာများကို စီးပွားရေးသမားများနှင့် ပြည်သူများကိုသာ အပြစ်ပုံချထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
#ကိုဗစ် #လူသေရုပ်လောင်း #သုဿန် #MPA
Dead Bodies Crammed in one place and Buried in Cemeteries
16 July 2021 By MPA
Dead bodies are being gathered altogether (out of public sight) for burial as corpses increase in Yangon cemeteries, we have learnt from charity organizations.
“What is being shared online of clear pictures is not because there are no corpses. There’safree space near the burial machine. All the corpses are put together there and we’re burning them one by one,” an anonymous official fromasocial relief organization said.
Currently, COVID-19 third wave is severely hitting Myanmar and numerous lives are being lost daily due to lack of oxygen with crammed dead bodies at cemeteries.
When asked about her plans about deaths due to lack of oxygen, the military-controlled Ministry of Health spokeswoman Dr. Khin Khin Gyi said to MPA, “In combatingapandemic, if one just stays at home, doesn’t inform when infected, buys oxygen by oneself and dies while breathing on it, you’ll know who is responsible for that if you think.”
Only 20% of the infected have died and if we look at statements by the WHO, once they haveacough, most people are so concerned and buy oxygens in advance for fear of contracting the virus. If the directions of the health ministry are followed, there won’t beashortage for those who really need them and we have already planned it, she continued.
According to the data MPA has collected, above 300 are dying each day in Yangon. Even ambulances are rare to carry the corpses. When contactedaCDC official as to how many deaths there are in Yangon each day, he replied, “We cannot tell that kind of information!”
For the public, in addition to not getting proper health care in the COVID-19 third wave, they are battling with the oxygen crisis and are facing many difficulties even after one dies – in the last journey of the deceased.
The coup SAC is blaming the public and business people for the oxygen crisis and price rise.